Umbhede omkhulu Ekamelweni @ The Gilmore - I-Airbnb
Umbhede omkhulu Ekamelweni @ The Gilmore
Jabulela ukuhlala okunethezekile e-Providence kuleli gumbi elihlanzekile, elinethezekile, futhi elitholakala kalula - eduze kwazo zonke izinsiza ezihlinzekwa yi-West End kanye ne-Federal Hill! Indawo ngokwayo inamahloni okugubha iminyaka eyi-100, futhi isanda kulungiswa kabusha iVictorian endaweni eyingqophamlando. Nakuba izindawo zokuhlala zingezesimanjemanje, kukhona amagugu okuqala afihliwe angatholakala endlini yonke.
Bheka ezinye izinhlu zami uma ufuna okuthile okuhlukile - nohambo olujabulisayo!
Sithatha zonke izinyathelo zokuqapha ezidingekayo ukuze siqinisekise ukuhlala okuhlanzekile, okunempilo, nokujabulisayo, futhi senze izinyathelo ezengeziwe zokuhlanza sisebenzisa imikhiqizo egunyazwe yi-World Health Organization ukuze siqinisekise indawo ephephile yazo zonke izivakashi zethu. Qhubeka ufunda ngezansi ukuze uthole incazelo yethu evamile, nokuhamba okuphephile!
Leli kamelo likhanya kahle, liyimfihlo, futhi liphephile. Uzothola indlovukazi enethezekile enekhono lokupholisa i-memory foam, kanye nedeski elenziwe ngezandla, itafulana eliseceleni kombhede kanye namashalofu okugcina izinto. Ikamelo lokuphumula, ikhishi, negumbi lokugezela kuhlanganyelwa nezinye izivakashi ze-Airbnb.
Izithombe ozibonayo yilokho kanye ozokuthola!
4.80 out of 5 stars from 235 reviews
4.80 · 235 okushiwo abanye
Bheka lezi zikhathi zokuhamba kwezinye izindawo, kanye nezinye zezindawo engizikhonzile!
I-Downtown Providence - 1.0mi - 7min
Inyuvesi yaseBrown - 1.6mi - 12min
I-RISD - 1.6mi - 10min
Isibhedlela saseRhode Island - 1.2mi - 7min
I-India Point Park - 2.4mi - 9min
Yima & Thenga - 2.0mi - 9min
I-Ogies Trailer Park Bar & Restaurant - 0.4mi - 2min
I-West Side Diner - 0.5mi -3min
I-Atwells Avenue - 1.3mi - 7min
Ibhodwe Elishisayo Lamei – 0.7mi – 4min
I-Avery - 0.5mi - 3min
Iqembu - 1.2mi - 7min
I-East End - 1.9mi - 10min
Ibha Yomphakathi Nekhishi - 1.6mi - 13min
I-McShawns Pub 2.3mi - 11min
I-Hong Kong Buffet - 3.3mi - 12min
I-Olneyville New York System - 1.3mi - 8min
Nakuba ngihamba njalo, ngingazenza ngitholakalele izivakashi ze-Airbnb noma nini lapho kudingeka. Ubumfihlo nokunethezeka kuyizinto eziza kuqala kimi, kanye nenqubo yokungena nokuphuma engenamthungo.